मुलुकी ऐन संशोधन प्रस्ताव आजै राष्ट्रिय सभामा, अदालतमा छलफल पनि आजै – Health Post Nepal
२०७५ असोज ४ गते ११:२४
बिहीबारका लागि तय भएको अदालतको छलफल स्थगित भएको छ । न्यायाधीश कम हुँदा वा प्राथमिकतामा अन्य मुद्दा परेका दिन अदालतले नै अर्को दिन राख्ने गरी छलफल स्थगित हुन्छ । अदालतले अर्को मिति तोकेर खबर गर्ने जानकारी दिने जनाएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।
सरकार र चिकित्सक संघबीचको सहमतिअनुसार मुलुकी ऐनको ‘इलाज कसुर’सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रस्तावमा आजै राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने भएको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा संशोधन गर्ने गरी चिकित्सक संघ र सरकारबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमाथि पनि आजै (बिहीबार) छलफल हुने भएको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सरकार र संघबीच १८ भदौमा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सहमतिविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा अदालतले सरकारसँगको सहमति तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि संघका तर्फबाट समेत अदालत जाने तयारी पूरा भएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जानकारी दिए ।
गिरीका अनुसार मुलुकी ऐनका फौजदारी र देवानी दुवै संहितामा रहेका विषयहरू संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस हुन लागेको हो । जसमा चिकित्सासँगै पत्रकार र अन्य क्षेत्रका समेत असन्तुष्टिका विषय छन् । १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाजसम्बन्धी महलले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै समस्या निम्त्याएपछि सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट संशोधन गर्न थालेको हो ।